Saturday, 06 April 2013 09:04	नागरिक
राजु नेपाल— के तपाई कामको तनावबाट मुक्त हुन शान्त र रमणीय ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने ललितपुरको नल्लु गाविसमा अवस्थित पाथिभरादेवी मन्दिर तपाईंको रोजाइमा पर्न सक्छ है! काठमाडौंको कोलाहलबाट राहत पाउन उपत्यका बाहिरकै गन्तब्य धाउनुपर्छ भन्ने छैन। घुमफिरको आनन्द लिन आकर्षक गन्तब्य बन्न सक्छ नल्लु। पाथिभरा क्षेत्रको रमणीय वातावरणले मन लोभिन्छ। तनमा फुर्ति बढ्छ।
तपाई यात्रा तय गर्नुहोस, हामी साथ दिन्छौं। पाथिभरा भन्नेबित्तिकै ताप्लेजुङको संझना आउँछ। राजधानीमा बस्नेहरुले छोटो दुरीमै पाथिभरा दर्शन गर्न सक्छन्। नल्लु-६ मा स्थानीयले ताप्लेजुङकै पाथिभरादेवीको हुबहु मूर्ति स्थापना गरेका छन्। पाथिभरादेवीको भाकल गर्नु भएको छ, तर समय र आर्थिक कारणले ताप्लेजुङ पुग्न समस्या परे पीर मान्नु पर्दैन। नल्लु पाथिभरा दर्शन गरे पुन्य मिल्छ। मनोकांक्षा पुरा हुन्छ।
नल्लु लगनखेलबाट करिब २२ किलोमिटर दक्षिणमा छ। ललितपुरको चापागाँउ, लेलेहुँदै त्यहाँ पुगिन्छ। जब तपाईं चापागाउँबाट लेलेतर्फ मोडिनु हुन्छ, नल्लु नपुगुन्जेल त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यले मन सुटुक्कै चोरेर लान्छ। मन हराउँछ कताकता! त्यसरी हराउनुको मज्जा बेग्लै हुन्छ। लालिगुराँसले राताम्मै भैसके जंगल। अहा! कति रमाइलो! लाग्छ, राताम्मे डाँडा तपाइँकै स्वागतमा उभिएका हुन्। कोइलीको कुहु! कुहु! कति मिठो स्वर! वातावरणै संगीतमय। प्रकृतिको संगीत जति मिठो संसारमा अरु केही होला?
जब तपाई नल्लु खोला पुग्नुहुन्छ, त्यहाँको दृश्यले नोस्टाल्जिक बनाइदिन्छ। बाल्यकालको झल्को आउँछ। खोलाको सफा पानीमा केटाकेटी गर्मी छल्दैछन्। चिसो पानीमा मस्त। मनोरम प्राकृतिक छटावीचको खोलाले पार्नसम्म मोहित पार्छ। किनारमा केटाकेटी फुटबल र बास्केटबलमा झुम्मिएको दृश्य झनै मनमोहक देखिन्छ। कोही कोही सारा दुःख पीडा भुलेर बगरमा पल्टिरहेका हुन्छन्। सायद स्वर्गीय आनन्द लुट्दैछन् उनीहरु।
उपत्यकाको कोलाहलले कुण्ठित मनलाई चराको सुरिलो संगीतले चंगा बनाइदिन्छ। मन भुर्र भुर्र उड्न थाल्छ। तिनकै स्वरमा स्वर मिलाई गुनगुनाउन मन लाग्छ। तपाईंको बालापन यसैगरी नबितेको भए के भो त, तपार्इं यहाँ त्यो बालापन अनुभव गर्न सक्नु हुन्छ। गन्तब्य पाथिभरासम्म भएकाले यात्रा पूर्व तयारी गर्न नबिर्सनुस्। चापागाउँ नाघेपछि खाजा खाने ठाउँ भेटिँदैन। खानेकुरा साथमै बोक्नु बेस हुन्छ। मन्दिरमा पूजा गर्न फूल-प्रसाद आफैं लिएर जानु पर्छ। त्यहाँ किन्न पसल छैन।
बाटो मन्दिरसम्मै पुग्छ तर ३ किलोमिटर वरैबाट कच्चि सुरु हुन्छ। बर्खा याममा यात्रा गर्न समस्या हुन्छ। हिउँदमा बाटो सुख्खा हुने भएकाले यात्रा सजिलो हुन्छ। त्यसैले जाडो मौसममा यात्रा गर्न उपयुक्त हुन्छ। रमाइलो कुरा, चापागाउँबाट लेले सुरु भएदेखि नै ठाउँठाउँमा 'पाथिभरा जाने बाटो' भनेर लेखिएका साइनबोर्डले तपाईंको यात्रा आफैं गन्तब्यतर्फ मोड्दै लान्छ। नल्लु पुगेपछि मुख्य सडकबाट सय मिटरमाथि चढ्नु पर्छ, पाथिभरा दर्शन गर्न। पाथिभराप्रति आस्था राख्ने भक्तजनलाई उपत्यकामै देवीको दर्शन गराउन वर्ष दिन अघि स्थापना गरिएको तिर्थस्थलले ताप्लेजुङकी देवीको झल्को मेटाइदिन्छ। नल्लुमा साढे सात फिट अग्लोे सिंहबाहिनी देवीको मूर्ति छ। वरपर शिवलिङ्ग, चार वटा गणेश, कान्छीदेवी लगायत मूर्ति छन्। ताप्लेजुङ र नल्लुका मूर्तिमा फरक यति छ कि ताप्लेजुङको पाथिभरा धातुबाट बनेका छ भने नल्लुको ढुंगाबाट।
जे माग्यो त्यहि पुरा हुने चमत्कारिक शक्तिकी देवी भन्दै नेपाली मात्र नभई भारतीय दर्शनार्थी समेत ताप्लेजुङमा ओइरिन्छन्। नल्लुमा पनि काठमाडौंमा बस्नेहरुको भिड लाग्न सक्छ। यो मन्दिर हाम्रो लागि पूजा अर्चना गर्न नजिकको गन्तव्य हो। पहाडको टुप्पामा रहेको मन्दिरका लागि ३ रोपनी जग्गा छुट्टयाइएको छ। मन्दिर वरपर वस्ती छ। पूजापाठ सकि छरिएर थकाइ मेट्न बसेका भक्तजनको मुहारमा सन्तुष्टिको थकान देख्न पाउँदा मन प्रफुल्ल बन्छ। देवी दर्शन तथा पूजा सकेपछि त्यहाँबाट देखिने हिमसृङखला हेर्न विर्सनु हुँदैन। नहेरी बस्नै कहाँ सकिन्छ र, आँखा त्यतै डोरिन्छन्। एक टकले हिमालतिर नजर लाउँदा थाक्दैनन् आँखाहरु।
शान्त पाथिभरा थुम्किमा बसेर खानेकुरा खाँदै लालिगुराँसले ढकमक्क पहाडी थुम्का हेर्दा लाग्छ, ती पहाड अन्नले भरिएका मानापाथि हुन्। ताप्लेजुङको पाथिभरा जस्तै!
यस्तो सौन्दर्यमा डुबुल्की मार्न पाउँदा नमरी स्वर्ग देखिन्न भन्ने उखान बेठिक लाग्छ। तनाब, थकान आफसे आफ हराउँछन्। साँच्चै स्वर्गसरी छ नेपाल!
चक्रपथबाट मात्र २२ किलोमिटर पर, जहाँ धुवाँ, धुलो, प्रदुषण र कोलाहल केही छैन। माइन्ड रिचार्ज गर्न आजै जाने होइन त नल्लु?
Dinesh Ghimire: ...
jane soch banaya maila.
jana soch banaya maila .
pathibhara mata ki jai ! jai !! jai !!!
थिमि फाँटमा 'क्रिकेटवा' (2013-03-16)
बिहानी व्यायाम (2013-03-16)